Njirimara nke roba floor-News-Topflor China nwere oke
1. Akụkụ a kacha mara amara nke roba bụ akwa na-agbanwe ya na ụkwụ dị mma.
2. Ọ nwere ezigbo mmịfe na-eguzogide, nke na-enweghị ike ịchọta site na ala ndị ọzọ siri ike dị ka okwute na taịliki. Mmetụta nke ije ije na roba roba siri ike ma zuru ike. Ala Rubber
3. Ala roba nwere nnukwu ike na ezigbo nguzogide akwa, nke dabara adaba maka oge ya na ọtụtụ mmadụ, nnukwu ụgbọ ala na ibu dị arọ. Ala Rubber
4. Enwere ike iji ala roba mee ogologo oge n'ime ụlọ na n'èzí
5. Rubber flooring nwere ike n'ime ọtụtụ pụrụ iche Njirimara na ojiji: dị ka akwa mkpuchi, antistatic, elu okpomọkụ na-eguzogide, mmanụ na-eguzogide, acid na alkali eguzogide, wdg
6. Rubber floor bụ ụdị ihe nchebe gburugburu ebe obibi: ọ bụ nke na-adịghị egbu egbu na nke na-adịghị emerụ ahụ, enweghị mbibi atọ na usoro mmepụta, enweghị ebu, enweghị nje bacteria, enweghị gas na-emerụ ahụ ma ọ bụ ịhapụ ihe n'oge eji eme ihe, ezigbo ọkụ mkpuchi arụmọrụ, Mmekọahụ antibacterial "= 99.9%
7. Ala roba na-eguzogide mmiri na mmiri, na mmetụta nke ụlọ na okpuru ala na-apụta ìhè
8. Ala roba na-amị ụda, nke nwere ike belata mkpọtụ nke ịga ije na-eme.
9. Ala roba dị mfe ịtọgbọ, dị na-arapara ya n’ala dị larịị, sie ike, dị ọcha ma kpọọ nkụ na nrapado kwesịrị ekwesị. Ebe a na-ewu ihe adịghị enwe uzuzu, ájá, ala ruru unyi, enweghị mkpọtụ iwu doro anya, ọ nweghịkwa nsogbu ọ bụla metụtara gburugburu ya.
10. Nlekọta nke ala roba dị nnọọ mfe, na nhicha kwa ụbọchị nwere ike ihichapụ ya na mmiri mmiri ma na-ehicha
11. Nnọchi nke roba roba dịkwa nnọọ mma. Ọ gaghị emebi ala mbụ ma ọ bụrụ na ọ dochie nke ochie. Ọ dịkwa nnọọ mfe iji dochie ihe ndị ọzọ dị n'ala.